Aqoon isweydaarsi lagaga arrin sanayey horumar gaarsiinta Mandera oo ka dhacey Magaalada Nairobi Axad, Oktoobar 21, 2012 (HOL) - Magaalada Nairobi waxaa ka qabsoomay shir ay soo qaban qaabiyeen Youth Forum Mandera, kaasoo looga hadlayey sida dhalin yarada ay qeyb uga noqon karaan horumarka ka socda Deegaanka Mandera ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalkan Kenya.
Waxaa lagu balamay in la isugu yimaado aqoon is weydaarsiyo midkan lamid ah, si arrimo badanoo kale la iskula lafa guro. Hanaanka maamul hoos u daadajinta ayaa dhawaan lagu wadaa in dalkan Kenya laga hirgaliyo, kuwaasoo gaaraya 47 county.
Dalkan Kenya ayaa lagu wadaa inay doorashada madaxtinimo qeybaheeda kala duwan ka dhacdo bisha March ee sanadka foodda inagu soo haya, taasoo dad badan niyad sami ay ka muujinayaan in doorashada ay ku dhici doonto si xaq iyo xalaal ah, amnina uu ku dheehan yahay. Said Hassan AntenoNairobi, Kenya.E-Mail: - saidanteno@yahoo.com
Axad, October, 21, 2012 (HOL)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamud (Siilaanyo) ayaa maanta Xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgaliyey magaaladda Berbera ee gobolka Saaxiil. Maamulka gobollka Hiiraan oo ka warbixiyay qarax maanta ka dhacay magaalada Baladweyne 10/21/2012 3:00 PM EST